Mpampiasa vola, ny Miarakap: manampy ho an’ireo orinasa tena mahomby | NewsMada
Mpampiasa vola, ny Miarakap: manampy ho an’ireo orinasa tena mahomby
Par Taratra sur 24/05/2019
Taorian’ny herintaona nijoroan’ny Miarakap, niantso ireo mpiara-miombon’antoka, mpikambana ao amin’ny filankevi-pitantanana, izy ireo niara-nivory tao amin’ny Vatel Ambatoroka, omaly. Ny Miarakap, mpamatsy vola ho an’ny orinasa ary mandray anjara feno amin’ny fitantanana ny renivola ampiasaina. Ny maha samy hafa azy amin’ny banky, tsy mandray anjara amin’ny fitantanana ny banky fa mampindrana. Mpiara-miombon’antoka izany ny Miarakap, mizara tombontsoa amin’izay orinasa idirany.
11,5 miliara Ar ny renivola hoentina amin’izay fandraisana anjara izay, mampiasa 100 tapitrisa Ar hatramin’ny 2 miliara Ar. « Orinasa manana traikefa mahita tombombarotra hatrany ny singa voalohany tohanana. Raha nahavita dingana iray izany orinasa izany, mendrika hahavita dingana roa, telo … », hoy Ramaholimiaso Barijaona, mpikambana ao amin’ny filankevi-pitantana. Ireo voaporofon’ny mpanao fanadihadiana fa manana fahaiza-manao, manana fahavononana hisondrotra, hahita tombombarotra hatrany amin’ny 40 % isan-taona ao anatin’ny telo taona misesy. Izay manana io tarehimarika io no voasokajy hahita ny « hypercroissance », toy ny any Eoropa.
Nanazava ny fomba ahitana izay fahombiazana izay ny iray amin’ireo mpitantana. Eo ny fanomezan-danja ny mpiasa hampavitrika azy mandrakariva, ao anatin’izany ny karama, ny tambin-karama, ny fiantohana sosialy, ny fitaovam-piasana ara-dalàna… Manaraka ny fahaiza-mitantana, ny fitantanana madio, ary ny paikady eo amin’ny raharaham-bola. Samy nitondra fanazavana momba ireo ny tompon’andraikitra ao amin’ny Vatel, Ramakavelo Falihery. Manambara ireo fa misy tokoa ny Malagasy mahay mitantana. Mbola vitsy dia vitsy anefa ny orinasa mahavita izany eto amintsika.
Ny Chicky, ny Apem Paiq, ary ny Vatel
Koa raha ny fangatahana fampiasam-bola 150 tonga tany amin’ny Miarakap, nandeha hatrany ny dingana rehetra teo amin’ny fifantenana, telo sisa ny voatazona : ny Chicky, ny Apem Paiq, ary ny Vatel. Raha fintinina, toeram-pisakafoana mampiasa olona 40 ny Chicky, nidiran’ny volan’ny Miarakap voalohany, ny septambra 2018. Ny Apem Paiq, mpampindram-bola (microfinance), mampiasa olona 25, nametrahan’ny Miarakap voalohany ny volany, ny avrily 2019. Ny Vatel, sekoly ambony momba ny fandraisam-bahiny sy ny fizahantany, amin’ny volana jona izao ny hampiasan’ny Miarakap voalohany ny volany.